တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ သမ္မတအသစ်အဖြစ် ရွေးကောက်ခံရသော မားကို့စ်ထံ ဝမ်းမြောက်ကြောင်းသဝဏ်လွှာပေးပို့ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်အား ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် အွန်လိုင်းအစည်းအဝေး၌ မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသည်ကို ဇန်နဝါရီ ၁၇ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ သမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်ခံရသော ဖာဒီနန် ရာမိုဒက်ဇ် မားကို့စ် (Ferdinand Romualdez Marcos) ထံသို့ ဝမ်းမြောက်ကြောင်းသဝဏ်လွှာအား မေ ၁၁ ရက်က ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့သည် ပင်လယ်ဖြတ်ကျော်လျက် တစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံ မျက်နှာမူထားသော အိမ်နီးချင်းများဖြစ်ကြောင်းနှင့် အေးအတူပူအမျှ မိတ်ဖက်များဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ရှီက ပြောခဲ့သည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း နှစ်နိုင်ငံကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးသည် နှစ်နိုင်ငံ ပြည်သူများ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ဆောင်ကြဉ်း၍ ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို ပံ့ပိုးလျက် ခိုင်မာကာ အဆင့်မြှင့်တင်လာခဲ့ကြောင်း ရှီက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အရေးပါသောအဆင့်၌ ရောက်ရှိနေကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးမှာလည်း အရေးပါသော အခွင့်အလမ်းများကို ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းနှင့် ကျယ်ပြန့်သောအလားအလာများကိုလည်း ကြုံတွေ့ခံစားလျက်ရှိကြောင်း ရှီက အလေးထားပြောခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ရှီက နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အရေးပါသည်ဟု မှတ်ယူကြောင်း၊ မားကို့စ်နှင့်အတူ အိမ်နီးချင်းကောင်းရပ်တည်ချက်နှင့် ပူးတွဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရေး၊ နှစ်နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူများအတွက် အကျိုးကျေးဇူးရှိစေမည့် နှစ်နိုင်ငံ ဘက်စုံ မဟာဗျူဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆက်ဆံရေးကို ထပ်မံအဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန် အသင့်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းနေ့တွင်ပင် တရုတ်နိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတ ဝမ်ချီဆန်းကလည်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတအဖြစ် ရွေးကောက်ခံရသော ဆာရာ ဇင်မ်မာမန် ဒူတာတေး-ကာပီယို (Sara Zimmerman Duterte-Carpio) ထံသို့ သဝဏ်လွှာပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
BEIJING, May 12 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping on Wednesday sentacongratulatory message to Ferdinand Romualdez Marcos on his election as president of the Republic of the Philippines.
On the same day, Chinese Vice President Wang Qishan also sentamessage to Sara Zimmerman Duterte-Carpio to congratulate her on her election as vice president of the Philippines. ■
Photo : President Xi Jinping deliversaspecial address in Beijing to the 2022 World Economic Forum virtual session, on Jan 17, 2022. (PHOTO / XINHUA)